Wararka - 2021 Dab-kariyaha Hal-abuurka leh ee Arcair ayaa ku guulaystay Abaalmarinta Nakhshadeynta Dhibcaha Cas: Nakhshad Alaabta 2021
Bishii Maarso 2021, Abaalmarinta Naqshadeynta Dot Dot ee Jarmalka, oo loo yaqaan "Abaalmarinta Oscar" ee warshadaha naqshadeynta, ayaa lagu dhawaaqay.Arcair 833 ayaa ku jiray liiska.
Abaalmarinta Naqshadeynta Dhibcaha Cas, Jarmalka "IF Award" iyo "Award IDEA" ee Maraykanka waxaa loo yaqaannaa saddexda abaal-marin ee naqshadaynta adduunka.Abaalmarinta Naqshadeynta Dhibcaha Cas waa mid ka mid ah tartamada ugu waaweyn uguna saameynta badan ee ka mid ah tartamada naqshadeynta ee caanka ah ee adduunka.
"Red Dot" waa abaalmarinta tayada naqshadaynta sare.Xeerbeegtida caalamiga ah waxa ay kaliya ku abaalmariyaan shaabada tayada la raadiyo ee alaabada leh naqshad heer sare ah.
Xeerbeegtida ayaa ku abaalmariyay: Hood Cooker Aan-dhaqameed (08-05473-2021PD).
Abaalmarinta badeecadan wanaagsan waxay heli doontaa aqoonsi iyo feejignaan caalami ah.
Guushu waa Bilawga
Hal qayb oo ka mid ah Guangdong ARCAIR APPLIANCE CO., LTD.ku guulaysiga Abaalmarinta Dhibcaha Cas: Nakhshad Alaabta 2021
Weligeed ma dhicin in ka badan taariikhda 60-sano ee tartanka naqshadeena sidaasshirkado badan iyo studios design ayaa la kulmay xukunka xirfadeed ee ourxeerbeegtida caalamiga ah sida sanadkan.Alaabooyin ka yimid ilaa 60 wadan ayaa na soo gaaray, iyo koodatayada naqshadeynta iyo heerka hal-abuurka ayaa lagu qiimeeyay hannaan dhowr ah oo soconayamaalmo.
Sidaa darteed, waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inaan ku ogeysiiyo in alaabtaadu awood u yeelatayqanci xeerbeegtidayada oo ku hel abaal-marin abaal marinta Red Dot Award: Nakhshad Alaabta 2021.
Hambalyo guushan weyn!
Xaqiiqda ah in aad sheegtay booskaaga goob adag oo kaqeybgalayaal ah ayaa u hadashatayada wanaagsan ee alaabtaada.Hadda guushan naqshadeynta u beddel isgaarsiinguul sidoo kale.U isticmaal calaamada guulaystaha ujeedadan.Run ahaantii "guulaysigu waaBilawga”, waa meesha ugu fiican ee laga bilaabo ka sheekaynta sheekada guushaadaalaabta.
Iyada oo la daabacayo Buuga Sannadka Naqshadeynta Dhibcaha Cas, ee bandhigga internetka iyobandhigyada bandhigyadayada, abaal-marinta alaabtaada ugu fiican ayaa heli doontaaqoonsiga caalamiga ah iyo dareenka.
2021.4.15-24 GUANGDONG ARCAIR APPLIANCE CO., LTD waxay ka soo qayb gashay 129th On-line Canton Fair, oo si firfircoon uga qayb qaadanaysa baahinta tooska ah si kor loogu qaado alaabada cusub ee macaamiisha adduunka oo dhan.
Arcair waxay soo bandhigtay noocyo kala duwan oo koofiyadaha mashiinka wax lagu karsado & hobyada soo gelinta inta lagu jiro bandhigga tooska ah:
Tags: daboolka mashiinka cuntada lagu kariyo, daboolka kala duwan, daboolka qiiqa, daboolka jikada, qiiqa jikada, Cappa, hotte, coifas, campanas,Dunstabzugshaube
1. Koofiyadaha mashiinka wax lagu karsado ee qaabka T
2. Daboolkii Ahraamta
3. Koofiyadaha mashiinka wax lagu karsado ee qalloocan
4. Koofiyadaha wax-karinta ee Slant
5. Koofiyadaha cunto kariyaha ee jasiiradda
6. Koofiyadaha mashiinka wax lagu karsado ee taxanaha ah
7. Daboolka laambada
8. Soosaarayaal isku dhafan oo leh hob induction
Waqtiga boostada: Oct-10-2021